SUDAN: Al bashiir oo kala diray golihiisii wasiirrada - Halbeeg News
KHARTOUM (HALBEEG) – Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al bashiir ayaa kala diray Golihiisii Wasiirrada, sababo la xiriira dhaqaale xumida dalkaas ku habsatay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Xukuumadda la kala diray oo ka koobnayd 31 wasiir, waxaa qayb ka ahaa Ra’iisul Wasaarihii Sudan Bakri Xasan Saalax. Al bashiir ayaa qorsheynaya in uu soo dhiso xukuumad ka tiro yar tii hore, taas oon ka badnaan doonin 21 wasiir.
Dalka Sudan ayaa wixii ka dambeeyey sannadkii 2011, markaas oo Koonfurta Sudan loo aqoonsaday dal madax bannaan, waxaa soo food saartay dhaqaale xumi baahsan iyadoo heerka sicir bararku gaaray 65%.
Sanndkii 2013 dadaallo dowladdu ku doonaysay in lagu kabo dhaqaalaha ayaa fashilmay, kaddib markii iska hor imaadyo dhiig ku daatay magaalo madaxda Khurduum ku dhex mareen booliska iyo dibadbaxayaal caraysan.
Sidoo kale Dowladda Sudan ayaa ku guul darreysatay dadaallo ay ku doonaysay in looga khafiifiyo cunaqabateymo dhaqaale oo ay dalkaas horay ugu soo rogeen dalal uu Maraykanku kow ka yahay.
Go’itaanka Koonfurta Sudan ayaa wiiqay dakhligii Sudan uga soo xeroon jiray dhoofinta shidaalka ceeriin, maadaama in badan oo kamid ah ceelashii shidaalku go’itaanka kaddib raaceen dhinaca Koonfurta Suudaan.